Faux Fur rug, Faux Fur Carpet, Faux lwegusha ityali, Wool ityali - Wenwen
China Ukwakha Ihowuliseyili Australian loqobo ...
Elungiselelweyo Luxury ebusika Real Long Fur Sheepsk ...
Ekhaya umhombiso lwegusha faux uboya ityali ao High ...
Fashion sell hot eco tshama friendly uboya ikhaphethi
White yasenza chaise longue lwegusha ababetheki kakhulu ...
Ihowuliseyili Australia lwegusha enye yonke s ...
Real ezisand Iwulu izikhuseli lwegusha Car Isitulo
Lwegusha Real Wool Car Isitulo
Universal Full Set Long Fur lwegusha Car Isitulo ...
yobukhulu enkulu bezimvu obumhlophe lambskin yokwenziwa elide ...
A Ilaphu eliphambili esikhangeleka ngathi noboya inkomo yafa. Villi zahlulwe iileya ezimbini, umaleko zangaphandle ezifumaneka ukukhanya nepeni ngqo, umaleko wangaphakathi ifayibha ecikizekileyo soft elifutshane. Uboya ezingezizo isetyenziswa ngokuqhelekileyo zangaphantsi, linings iimpahla, iminqwazi, ezibomvu, izinto zokudlala, oomatrasi, imihombiso elingaphakathi, kunye iikhaphethi. Iindlela mveliso ziquka ukunitha (weft ukunitha, naselusingeni lokoluka anganithi kunye nezitishi) nokuluka. Indlela ukunitha weft ukunitha le ezanda kwaye kakhulu ngokubanzi ...
Ukutywinwa strip lamatywina olunye uhlobo lwento, ukwenza kube lula ukuvula, kwaye idlala indima yokothuka edalwayo, manzi, yokugquma ephilileyo, yokugquma ubushushu, uthintelo uthuli, kunye nitrogen. Matywina zenziwe iirubber, iphepha, intsimbi, iplastiki kunye nezinye izinto ezininzi. Ukususela 1980, oonotsheluza yerabha itywina ziye isicelo iimoto, iingcango neefestile, nekhabhathi, iifriji, izikhongozeli kunye namanye amashishini. Ngokutsho iimfuno zamashishini ezahlukeneyo, eziqulunqile unique ...
Le kuhola wendlela, akahambi ubunjwe guardrails yentsimbi incence amabini kunye nezithuba ezibini fixedly ska phakathi kwabo bobabini. Izithuba ezibini ska phakathi guardrails ezimbini ngentsimbi yenyuka. Xa umendo uyasebenza eqhelekileyo, i kuhola kube lula kufakwa le nkcazelo ilandelayo emngxunyeni pre-efakwe kwi kuvulwa ukukhusela ayivalele kuhola evela ngaphandle kwendlela. Yinto efanayo nobumnandi. Xa isithuthi engozini nayo, kuba kuhola sentsimbi incence iye imp elungileyo ...
Cai Tuban, okwabizwa ngokuba kwipleyiti umbala, umbala ipleyiti. Umbala camera ipleyiti sobhedu ezenziwe ipleyiti ngentsimbi ebandayo-liqengqiwe kunye ipleyiti yesinyithi kwalenza njenge zeendawana, phantsi ukuba iveze pretreatment (bamafutha, ukucoca, unyango ukuguqulwa imichiza), kugalelwe yi indlela oluqhubekayo (mqengqeleki indlela ngeso lenyama), wapheka kunye zipholile Products . I plate camera ngensimbi na ubunzima ukukhanya, emhle imbonakalo kunye nokumelana elungileyo, kwaye zingenziwa ngqo. Inika uhlobo olutsha zempahla ekrwada ...
Ngokwe-manani ukusuka Hebei Metallurgical Industry Association, ukususela ngoJanuwari ukuya kuFebruwari 2018, le ngeniso zoshishino ngentsimbi ye kwiPhondo Hebei yaba 156.106 bhiliyoni yuan, ngonyaka-on-kunyaka ukunyuka nge 5.03%, olubalelwa ngenxa 27.67% kwiphondo olungundoqo ingeniso yeshishini industrial; le lenzuzo 9,84 billion. Yuan, ukwanda 53,76% kunyaka-on-nyaka, olubalelwa ngenxa 30,47% ngengeniso industrial eli phondo. Kweli xesha Januwari-Februwari, engundoqo ingeniso yeshishini ma ...